Momba anay - Suzhou Marcospa
Suzhou Marcospadia natsangana tamin'ny taona 2008. Manokana amin'ny famokarana milina fanaovana gorodona, toy ny grinder, polisera ary mpanangona vovoka. Vokatra avo lenta, lamaody, be mpampiasa amin'ny maritrano isan-karazany, tsy vitan'ny besinimaro amin'ny tsenan'ny varotra eto an-toerana, fa aondrana any Eropa sy Etazonia koa.
Marcospa hinge nandritra ny taona maro dia nifikitra hatrany tamin'ny "kalitaon'ny vokatra mba hahatafitana velona, ​​tanjona amin'ny serivisy fitokisana sy serivisy fampandrosoana". Manolo-tena hanome anao vokatra avo lenta sy serivisy kalitao. Manàna ekipa fitantanana endrika matihanina sy vita fanoloran-tena, manomboka amin'ny famolavolana vokatra, famolavolana bobongolo, famolavolana ny fivorian'ny vokatra, ho an'ny lafiny tsirairay sy ny fizotrany dia sedraina mafy sy hifehezana.
Nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay amin'ny famokarana sy fitantanana ary fikarohana, Marcospa dia nanangana rafitra fitantanana kalitao manokana. Marcospa dia mampihatra hatrany ny foto-kevitra momba ny famoronana lanja ho an'ny mpanjifa ho an'ny vokatra ampanjifaina mifanaraka amin'ny ilain'ny mpanjifa samy hafa, ary manome hatrany ny vahaolana amin'ny mpanjifa sy ny olana ara-teknika. Fikarohana bebe kokoa sy fanavaozana ary hatsarana.
Nandalo ny fanamarinana rafitra kalitao ISO9001 izahay, ary ny vokatra sasany dia nandalo ny fanamarinana CE Eoropeana. Mba hiantohana ny fanavaozana ny vokatra mitohy sy ny serivisy aorian'ny varotra, vondron'ny injenieran'ny serivisy sy varotra aorian'ny varotra dia nofanina hikaroka sy hamolavola, hamolavola ary hamokatra fitaovana indostrialy ary hanangona vovoka. Orinasa mampifandray ny fitantanana setroka sy vovoka, miaraka amina vokatra marobe, izay afaka mamaly ny filan'ny famokarana ny ozinina rehetra ary manome vahaolana feno amin'ny ankapobeny. Ny vokatra Maxkpa dia mifanaraka amin'ny fitsipika sy tondro iraisam-pirenena momba ny fiarovana. Ny vokatra dia nosedraina sy voamarin'ny andrim-panjakana iraisam-pirenena. Mpanjifa manome antoka fiarovana fiarovana famokarana.
Ny andiam-pamokarana ankehitriny dia misy mpanadio vovoka indostrialy, mpanangona vovoka indostrialy, mpanadio setroka, mpanadio vovoka porofo pneumatika, famolavolana fanesorana vovoka fitaovana ary fanovana fametrahana, programa manohana fitaovana ary vahaolana hafa amin'ny fanesorana vovoka hafa. Ny vokatra Ingmar dia be mpampiasa amin'ny fanodinana vy, fitaovana milina, fanamboarana fiara sy sambo, Fanafody sy sakafo, fitafiana fisorohana, akora simika tsara, fiaramanidina haingam-pandeha, porofo mipoaka ary indostria hafa!
Miarahaba anao am-pitiavana ary manokatra ny fetran'ny serasera. Mifanentana amin'ny namanao tonga lafatra izahay!